Prime Day: Iwo akanakisa madhiri pane Apple zvigadzirwa (zuva 22) | IPhone nhau
Prime Day: Zvakanakisa Zvipenga paApple Zvigadzirwa (Zuva 22)
Ignacio Sala | 22/06/2021 16:00 | Yakagadziridzwa ku 22/06/2021 16:05 | IPhone zvishongedzo, iPad
Nhasi June 22 izuva repiri uye rekupedzisira rauinaro kana uri Amazon Prime mushandisi kutora mukana wehuwandu hukuru hwezvipo izvo chikuva ichi chinoita kuti tiwanikwe kwatiri kusvika 23:59 pm nhasi. Muchinyorwa icho isu takatumira nezuro, tinogona kuwana nhamba hombe yezvipo izvo, zvinosuwisa, haichawanikwi. Nekudaro, kune zvimwe zvinopihwa zvakaenzana kana zvinonakidza kupfuura izvo zvatakaburitsa nezuro.
1.1 iPhone SE (2020) kubva ku449 euros
1.2 iPhone 12 Pro kubva ku1.099 euros
2.1 iPad Pro 2021 kubva 829 euros
2.2 iPad mini 2019 kubva ku404 euros
2.3 IPad Zvishandiso
2.4 Mashiripiti Khibhodi 2020 kubva 279 euros
2.5 Logitech Combo Kubata kwe94 euros
3 Zvishongedzo nezvimwe
3.1 eufy 2K inoenderana HomeKit ye33,99 euros
3.2 AirPods Pro ye188 euros
3.3 AirPods ye129 euros
3.4 Nuki Combo smart kukiya ye199 euros
3.5 Netatmo mamiriro emamiriro ekunze e109 euros
3.6 MagSafe inoenderana mota charger ye18,89 euros
3.7 MagSafe 2-in-1 desktop charger ye39,19 euros
iPhone SE (2020) kubva ku449 euros
Iyo yakachipa iPhone iyo Apple inotengesa nhasi ndiyo iPhone SE, modhi ine 4,7-inch inoratidzira iine yakafanana dhizaini seiyo iPhone 8.
The model of 256 GB inowanikwa ye535 euros, iyo 128GB vhezheni iri 4 euros inodhura kupfuura iyo 256 GB vhezheni nepo modhi yekupinda, iyo 64GB vhezheni haina kana kutipa inonakidza dhisikaundi uchienzaniswa nemutengo wepamutemo weApple Chitoro: 449 euros.
iPhone 12 Pro kubva ku1.099 euros
Kana iwe uchida kunakidzwa nemabasa ese ayo Yakanyanya simba iPhone pamusika, sarudzo yakanakisa ndeye iPhone 12 Pro, modhi iri mune yayo 128 GB vhezheni inowanikwa kune 1.099 euros.
Kana 128 GB ichipera, mhando ye 256 GB inowanikwa ye1.239 euros and the 512 GB vhezheni inosvika 1.488 euros.
iPad Pro 2021 kubva 829 euros
El iPad Pro 2021 ine M1 processor inokwikwidza yakanangana nemaMac ekambani imwe chete uye zvese zvinoita kunge zvinoratidza kusangana kwemunguva yemberi uko kubva kuApple vanoramba kuratidza. Iyo 11-inch modhi, mune yayo 128 GB vhezheni inowanikwa kune 829 euros. Iyi vhezheni ne nhare mbozha yekubatanidza inodonhedza ku979 euros.
Iyo 256GB vhezheni yekuchengetedza uye Wi-Fi kubatana inowanikwa ma979 euros. Mamwe mamodheru havana dhisikaundi, senge 12,9-inch modhi kubva muna 2021.
iPad mini 2019 kubva ku404 euros
Kana iwe uchitsvaga compact compact, iwe unofanirwa kutarisa iyo mini mini. Iyi modhi, yakatangwa pamusika mu2019, iri inoenderana nezera rekutanga Apple Penzura, inotungamirirwa neA12 Bionic processor uye inosanganisira 7,9-inch screen. kubva nhasi kusvika mangwana, tinogona kubata v256 GB modhi kwema 490 euros chete.
Kana iyo 256GB modhi rakakura kwazvo kwauri, imwe sarudzo yekutarisa ndeye 64 GB vhezheni ye404 euros.
Kana iwe uchida kuwana zvakanakisa kubva kune yako Apple Penzura inoenderana iPad kana iPad Pro, iwe unofanirwa kufunga nezve kutenga Apple Penzura. Ichi chishandiso chinowanikwa mushanduro mbiri: chizvarwa chekutanga uye chechipiri, mhando idzo Ivo inowirirana akasiyana iPad mudziyo.
El Chizvarwa chechipiri Apple Penzura, Iine mutengo wenguva dzose we 99 euros, zvisinei, pakati nhasi nanhasi, inowanikwa mairi 67,25 euros chete.
Yechipiri chizvarwa modhi, inoenderana ne11-inch iPad Pro 2nd chizvarwa zvichienda mberi uye 12,9-inch iPad Pro 3rd chizvarwa zvichienda mberi, inowanikwa ma111,50 euros, apo mutengo wayo wenguva dzose uri 135 euros.
Iyo yakachipa Apple Penzura inonzi Crayon uye inogadzirwa naLogitech. Ichi chishandiso chinoenderana neese iPad 2019 uye gare gare mamodheru (kwete iPad Pro) uye inowanikwa ma50 euros.
Mashiripiti Khibhodi 2020 kubva 279 euros
Nekuvhurwa kwePad Pro Pro 2021, Apple yakagadziridza iyo yeMicrosoft Keyboard kuti igadzirise kune iyo nyowani nyowani yemhando iyi, iyo yakawedzerwa ne5 mm, kunyangwe mutsauko wacho usingaonekwe. Iyo Yemagetsi Khibhodi iyo Apple yakaburitswa mu2020 nokuti 12,9-inch iPad Pro inowanikwa paAmazon kwema 273 euros chete.
Itsva Zvemashiripiti Khibhodi yeiyo Pro Pro yechishanu Chizvarwa (2021) 12,9-inch inowanikwa pamutengo mumwe chetewo semuApple Store: 399 euros. Iyi modhi inokodzera iyo keyboard uye iyo Pro Pro zvakakwana, kwete senge 2020 modhi, kunyangwe iwe uchifanirwa kutarisisa kuti uzvione.
El Mashiripiti Kibhodhi ye2021-inch iPad Pro 11, haina kana chinodzikisira, nekuti iwo mukobvu weiyi modhi ichiri yakafanana neyegore rapfuura modhi, nekuti iyo skrini haina kufanana neiyo inowanikwa mune 12,9-inch (miniLED) modhi kubva 2021.
Logitech Combo Kubata kwe94 euros
Akachipa mapadhibhokisi eAmazon ari emhando yepamusoro, zvakadaro 99% yadzo haina basa zvachose kana chinangwa chako chiri chekunyora maawa mazhinji nefoni iyi.
Sarudzo inonakidza kwazvo yekufunga nezvayo, tinoiwana mu Logitech Como Kubata, iyo keyboard iyo inosanganisira iyo Trackpad, QWERTY dhizaini, inoenderana neiyo Chizvarwa chechitanhatu iPad uye chii inowanika ku94,39 euros.
Iyi modhi inowanikwawo kune iyo iPad Pro 2021 ye229 euros, kuva a yakanakisa imwe nzira yeMicrosoft Keyboard, kunyangwe isiri kutengeswa mazuva ano.
eufy 2K inoenderana HomeKit ye33,99 euros
Iyo eufy 2K kamera, yatakatove nemukana wekuita ongorora mu iPhone News, yakaderera kubva ku49,99 euros kusvika ku33,99 euros. Kwete chete inowirirana neKeKKit, asi zvakare, ndizvo zvakaita Apple Kumba Yakachengeteka Vhidhiyo (chero bedzi isu tine anopfuura mazana maviri GB chibvumirano kuburikidza neICloud).
AirPods Pro ye188 euros
Kana iwe wakamirira zuva iri kuti utore mukana wekupihwa neAirPods, zuva rako rasvika. Imwe yeakanakisa kupa kwatinogona kuwana kuAmazon, tinoiwana muAirPods Pro, Apple isina waya mahedhifoni ane kudzima ruzha anowanikwa 188 euros, ndoda 100 euros yakachipa kupfuura muApple Chitoro.
AirPods ye129 euros
Chizvarwa chechipiri cheAirPods chinowanikwawo pa mutengo unonakidza kwazvo. Tinogona kuwana iyo modhi iyo inobhadharwa netambo ye129 euros.
Nuki Combo smart kukiya ye199 euros
Iyo Nuki smart kukiya, imwe yemidziyo iyo isu takaongorora muActualidad iPhone, inotibvumira kudzora kuvhura nekuvharwa kwemusuwo wemba yedu kubva ku smartphone yedu, inoenderana neKeKKit, Google Mubatsiri uye Alexa.
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 269,99 euros, asi isu tinogona kuiwana kwema 199,99 euros chete zuva rese nhasi. Zvinonzwisisika Iyo Nuki Combo 2.0 yekukiya chigadzirwa cheAmazon Choice.
Netatmo mamiriro emamiriro ekunze e109 euros
Kwe 109 euros Tine chiteshi chezvemamiriro ekunze cheNetatmo, chiteshi chinoenderana neApple's HomeKit neAmazon Alexa uye yatiriwo Kwayedzwa paChokwadi iPhone, kunyangwe yakanga isina kutsigirwa neKeKKit panguva iyoyo, kuenderana kwakawedzerwa makore mashoma apfuura. Mutengo wenguva dzose weiyi nhepfenyuro yemamiriro ekunze i149 euros.
MagSafe inoenderana mota charger ye18,89 euros
Kwe 18,89 euros, isu tinazvo cMagSafe inoenderana isina waya mota charger kubva kumugadziri HaloLock, chaja inotibvumidza kubhadharisa uye nekuisa chero iPhone 12 modhi padhibhodhi remota yedu.
MagSafe 2-in-1 desktop charger ye39,19 euros
Choetech inotipa iyo a MagSafe 2-in-1 Inoenderana Wireless Chaja iyo zvakare inosanganisira yekuchaja base kune, semuenzaniso, kuchaja isina waya bhokisi reAirPods. Iyi charger inosanganisira 1 mita USB-C tambo uye 30 W inokurumidza adapter yemagetsi. Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa..
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Prime Day: Zvakanakisa Zvipenga paApple Zvigadzirwa (Zuva 22)
Ireland yaizofanira kuwedzera mwero wayo we12,5% ​​kuApple nemamwe makambani makuru
ICloud Calendar Spam Zvichiri Chinetso cheApple